Okudlule, Okwamanje, Nekusasa Lokumaketha Kwe-inthanethi | Martech Zone
Okudlule, Okwamanje, Nekusasa Lokumaketha Kwe-inthanethi
ULwesihlanu, February 14, 2014 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 15, 2014 Douglas Karr
Enye yezinto ezithakazelisa kakhulu ekusebenzeni kwimidiya emisha ukuthi amathuluzi ethu namakhono ethu ahamba ngokushesha okukhulu njengokwakhiwa kwehardware, umkhawulokudonsa namapulatifomu. Izinyanga eziningi ezedlule, ngenkathi kusebenza embonini yamaphephandaba, bekuyinselelo enkulu ukukala noma ukubikezela amazinga empendulo ezikhangisweni. Sikhokhele ngokweqile yonke imizamo ngokumane siphonse izinombolo eziningi kuyo. Okukhudlwana phezulu koqweqwe, kungcono phansi.
Ukumaketha kweDatabase kufikile futhi sikwazile ukuhlanganisa idatha yangaphandle yokuziphatha, kwamakhasimende kanye nenani labantu ukubhekisisa kangcono imizamo yethu. Ngenkathi umsebenzi wawunembile kakhulu, isikhathi esasithatha ukukala impendulo sasibucayi. Ukuhlolwa nokwenza kahle kwakudingeka kwandulele imikhankaso futhi kwabambezela imizamo yokugcina. Futhi, besincike kumakhodi amakhuphoni ukulandelela ngokunembile idatha yokuguqulwa. Amakhasimende ethu ayevame ukubona ukukhuphuka kokuthengisa, kepha hhayi ngaso sonke isikhathi abone amakhodi asetshenzisiwe ukuze isikweletu singanikezwa njalo lapho kufanele khona.
Isigaba samanje semizamo yokukhangisa ezinkampanini eziningi kulezi zinsuku yimizamo yeziteshi eziningi. Kubonakala kunzima kubakhangisi ukulinganisela amathuluzi nemikhankaso, bafunde ukuthi bangawazi kanjani, bese balinganisa izimpendulo zesiteshi esiwela. Ngenkathi abathengisi bebona ukuthi ezinye iziteshi ziyabasiza abanye, imvamisa asinaki ukulingana okuhle kanye nokusebenzisana kweziteshi. Siyabonga okuhle ukuthi amapulatifomu afana ne-Google Analytics anikeza ukubonwa okuguqukayo kweziteshi eziningi, ukudweba isithombe esicacile sezinzuzo eziyindilinga, izinzuzo zokuwela, nezinzuzo zokugcwala komkhankaso weziteshi eziningi.
Kuyathokozisa ukubona izinkampani ezinkulu kakhulu esikhaleni esifana neMicrosoft, iSalesforce, i-Oracle, iSAP, ne-Adobe bethenga ngonya amathuluzi wokumaketha esikhaleni. ISalesforce nePardot, ngokwesibonelo, ziyinhlanganisela emnandi. Kunengqondo kuphela ukuthi uhlelo lokuzenzekelayo lokumaketha luzosebenzisa idatha ye-CRM bese lubuyisela idatha yokuziphatha kuyo ukuze kugcinwe kutholakale futhi kutholakale amakhasimende. Njengoba lezi zinhlaka zokumaketha ziqala ukuhlangana ngaphandle komthungo, kuzohlinzeka ngomsebenzi omningi abathengisi abangalungisa endizeni ukukhuphuka nokwehla kwe-spigot eziteshini abazifisayo. Lokho kujabulisa kakhulu ukucabanga ngakho.
Sinezindlela eziningi zokuhamba, noma kunjalo. Ezinye izinkampani ezimangalisayo sezivele ziguqula ngolaka ukubikezela analytics amamodeli azohlinzeka ngemininingwane enembile yokuthi ushintsho esiteshini esisodwa luzokuthinta kanjani ukuguqulwa kukonke. Iziteshi eziningi, ukubikezela analytics kuzoba ukhiye kuwo wonke amathuluzi omthengisi ukuze baqonde ukuthi bangayisebenzisa kanjani futhi kanjani amathuluzi angaphakathi kwayo.
Njengamanje, sisasebenza nezinkampani eziningi ezidonsa kanzima. Ngenkathi sihlala sabelana futhi sixoxa ngemikhankaso esezingeni eliphezulu kakhulu, izinkampani eziningi zisabhala imikhankaso yokuqhuma kanye nokuqhuma kwamasonto onke ngaphandle kokwenza ngezifiso, ngaphandle kokuhlukaniswa, ngaphandle kwezimbangela, nangaphandle kwemikhankaso yezinyathelo eziningi yokuthengisa. Eqinisweni, izinkampani eziningi azinayo ngisho ne-imeyili okulula ukuyifunda kuselula.
Ngikhuluma nge-imeyili ngoba kungukuxhumana kwawo wonke amasu wokumaketha online. Uma wenza usesho, udinga abantu ukuthi babhalise uma bengeke baguquke. Uma wenza amasu wokuqukethwe, udinga abantu ukuthi babhalise ukuze uzobathola babuya. Uma ugcina, udinga ukuqhubeka nokunikeza inani ngokufundisa nokuxhumana namakhasimende akho. Uma uku-media media, udinga ukuthola izaziso zokuzibandakanya. Uma usebenzisa ividiyo, udinga ukwazisa izithameli zakho lapho ushicilela. Ngisamangazwe inani lezinkampani ezingenalo isu le-imeyili elisebenzayo.
Manje sikuphi? Ubuchwepheshe buye bashesha futhi buhamba ngokushesha kunokutholwa. Izinkampani ziyaqhubeka nokugxila ekugcwaliseni i-faneli esikhundleni sokubona izindlela ezihlukile zokuzibandakanya ezenziwa amakhasimende empeleni. Abathengisi bayaqhubeka nokulwela amaphesenti wesabelomali somthengisi ukuthi bangafanelwa ukunikezwa umthelela wesiteshi sabo esiphambanweni. Abathengisi bayaqhubeka nokulwa nezinsizakusebenza zabantu, ezobuchwepheshe nezemali abazidingayo ukuze baphumelele.
Siya lapho, noma kunjalo. Futhi izinhlaka ezisungulwa izinkampani ezinkulu kanye nokuthandwa kwazo kuzosisiza ukuhambisa inaliti ngempumelelo, kahle, futhi ngokushesha.
Feb 14, 2014 ngo-10: 27 PM
Ngokubona kwami, ngicabanga ukuthi amabhizinisi kufanele aphathe konke ukuxhumana njengendawo yokuxhumana nezilaleli zabo. Kalula nje, akuzona zonke iziteshi ezifanayo futhi ngasinye siletha uhlobo olwehlukile lwesipiliyoni. Iphutha elikhulu kakhulu ukuthumela yonke indawo ngaphandle komyalezo ohlangene noma okubi kakhulu, hhayi ukuletha inani elizonika amandla amakhasimende akho.
Feb 15, 2014 ngo-10: 17 AM
@seventhman: iphuzu eliqinile le-disqus. Ukuthengiselana ngaphandle kokuqonda ukuthi umsebenzisi ukwedivayisi noma kusikrini akuso akukukhulu kangakanani. Ngikuthola lokho nge-Twitter naku-Facebook. Yize sishicilela futhi siphakamisa ngakunye, i-Facebook iyingxoxo enkulu ngenkathi i-Twitter ingaphezulu kwebhodi lezaziso.
Feb 15, 2014 ngo-9: 33 AM
Okuthunyelwe okuhle! .. Siyabonga ngokwabelana noDoug! ..
@ treb072410: disqus Kwaziswa kakhulu!
Jun 14, 2017 ku-2: 21 PM
Siyabonga ngokwabelana ... ukuthole lokhu kuwusizo